Bush ကိုလမ်းပြပါ နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ Bush ကိုလမ်းပြပါ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ကြှနျုပျတို့မှာ Taiwan ငွေရတတ်သောသူအရည်အသွေးကိုထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ပို့ကုန်နှင့်စက်ရုံမှာ Bush ကိုလမ်းပြပါ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ငါတို့သည် သာ. ထက် 8 နှစ်အထူးထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံတင်းကျပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များစံချိန်စံညွှန်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အမိန့်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝယ်လိုအားထမ်းဆောင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်အကြံပြုချက်များရှိပါကလွတ်လပ်စွာကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - TD8
Die Casting Mould အတွက် Bush ကိုလမ်းညွှန်ပါ
လမ်းညွှန်ချုံသည်လမ်းပြအခန်းကဏ္ play အဖြစ်လမ်းညွှန်ပို့စ်နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုသောမှိုဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်.ယေဘုယျအားဖြင့်ရွေ့လျားမှု၏တိကျမှုကိုသေချာစေရန်ပုံစံခွက်များသို့မဟုတ်အချို့စက်ပစ္စည်းများတွင်သုံးသည်.
CNC Lathe ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်
ကြာမြင့်ချိန်:၁၅ ဝန်းကျင်-ငွေပေးချေမှုခံယူပြီးရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/guide-bush.html
အကောင်းဆုံး Bush ကိုလမ်းပြပါ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Bush ကိုလမ်းပြပါ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
Die Casting မှိုများအတွက် Ejector Pinejector pin သည်ထုတ်ကုန်မှိုမှထုတ်သောအစိတ်အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းသည်.တွန်းတံကိုထုတ်လိုက်သောအခါ,ဖိအားဖိစီးမှုကြောင့်ကျိုးခြင်းသို့မဟုတ်ကွေးခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်.ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကိုကာကွယ်ဖို့,တွန်းတံသည်လုံလောက်သော compressive strength နှင့် bending strength ရှိရန်လိုအပ်သည်. ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ပစ္စည်း:ဇ-13 SKD-61 အရွယ်အစား:စံ/စိတ်ကြိုက် မာကျောမှု:HRC 38±2̊ မျက်နှာပြင်မာကျောမှု:HV ၁၀၀၀-1200̊နိုက်ထရိုဂျင်ကုသမှု HITACHI&တောင်ကြီးမြို့;ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်အတွင်းပိုင်းတင်းကျပ်မှုနှင့်အတွင်းမျက်နှာပြင်ညီညာမှုနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ကုသမှုတို့ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:၁၅ ဝန်းကျင်-ငွေပေးချေမှုခံယူပြီးရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်
Die Casting Mould အတွက် Ejector Sleeves များအဆိုပါထုတ်လွှတ်လက်အဓိကအားဖြင့်ကြိုတင်အနုပညာအတွက်အတွင်းအပေါက်အသိုက် ejector သောအချိန်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်-စားသုံးခြင်း,အလုပ်သမား-အကြိတ်အနယ်,ejector အပေါက်သည်ဝတ်ရလွယ်ကူသည်.အသုံးပြုမှုကာလပြီးနောက်,တည်နေရာတိကျမှုသည်အလွန်လျော့ကျသွားပြီးအစားထိုးကုန်ကျစရိတ်လည်းတိုးလာသည်.အပေါက်ရှင်းလင်းရေးအတွက်အံမ ၀ င်ဘဲအတွင်းနှင့်အပြင်အပေါက်များ၏လိုအပ်ချက်များကဲ့သို့နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများကိုအာမမခံနိုင်ပါ. ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ရိုက်ပါ:အင်္ကျီလက် ပစ္စည်း:SK2 SUJ-2 အရွယ်အစား:စိတ်ကြိုက် မျက်နှာပြင်မာကျောမှု:1000-1200̊နိုက်ထရိုဂျင်ကုသမှု လုပ်ငန်းစဉ်:အတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်,အင်္ကျီ ၂ စွန်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်ကိုင်ထားသောစက်ဖြင့်ဖြတ်သည်→ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲအတွင်းနှင့်အပြင်ဗဟို၌တိကျသည်→ကြိတ်ချေမှုကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားသောအတွင်းနှင့်အပြင်ပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးတွင်နိုက်ထရိုဂျင်ကုသမှု. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:၁၅ ဝန်းကျင်-ငွေပေးချေမှုခံယူပြီးရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းသို့အခြားအရာများငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်